Archives des Anjozorobe - Midi Madagasikara
Anjozorobe : Tovovavy roa matin’ny pesta
Redaction Midi Madagasikara 5 mars 2014 Anjozorobe, matin’ny pesta
Tovovavy 14 taona sy 19 taona no voalaza fa matin’ny aretina pesta tany Ambohitrakatso any Anjozorobe. Fahafatesana hafahafa no nahafaty ireto tovovavy ka niantso dokotera ny havany hanao ny fizahana ny razana ary voamarika tamin’izany fa aretina pesta tokoa no nahafaty azy roa vavy. Tsy maintsy nalevina ny andron’ny alatsinainy ihany moa ny razana ho…
Anjozorobe : Amidy Ar. 2 tapitrisa ny “Mass 36”
Redaction Midi Madagasikara 3 mars 2014 Amidy, Anjozorobe, Mass 36
Saron’ny zandary avy ao Anjozorobe ny lehilahy iray antsoina hoe Rafrà. Izy io dia voasambotra niaraka tamin’ny basy “mass 36” sy bala 16, fitaovam-piadiana izay nataony tao anaty sakaosy. Nomarihany nandritra ny fanadihadiana azy fa miaramila Lietnà iray izay monina eny Ankaraobato no miaraka manao trafikam-basy aminy. Vidiny iray tapitrisa ariary any amin’io miaramila io…